तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल पौष २६ गते बुधबार – Page 272181 – Etajakhabar
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल पौष २६ गते बुधबार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः । पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी
श्रीसूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, साधारण नाम संवत्सर,शाके १९३९, विक्रसम्वत २०७४ साल पौष २६ गते बुधबार
नेपाल सम्बत ११३८ पोहेलागा, सन् २०१८ जनवरी १० तारिक कृष्णपक्ष नवमी तिथि राती ९ वजेर ९ मिनेटसम्म, चित्रा नक्षत्र विहान ७ वजेर २७ मिनेटसम्म,सुकर्मयोग,तैतिल करण, आनन्दादियोग काल,सूर्य धनु राशीमा,चन्द्रमा तुला राशीमा ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ८÷१६ वजेसम्म लाभ वेला,८÷१६ वजेदेखि ९÷३४ वजेसम्म अमृत वेला,९÷३४ देखि १०÷५२ वजेसम्म काल वेला,१०÷५२ देखि १२÷११ वजेसम्म शुभ वेला,१२÷११ देखि १÷२९ वजेसम्म रोग वेला,१÷२९ देखि २÷४७ वजेसम्म उद्वेग वेला,२÷४७ देखि ४÷६ वजेसम्म चर र ४÷६ वजे देखि सूर्यास्तसम्म लाभ वेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ७÷५ वजेसम्म उद्वेग वेला,७÷५ वजेदेखि ८÷४७ वजेसम्म शुभ वेला,८÷४७ देखि १०÷२८ वजेसम्म अमृत वेला,१०÷२८ देखि १२÷१० वजेसम्म चर वेला,१२÷१० देखि १÷५१ वजेसम्म रोग वेला,१÷५१ देखि ३÷३३ वजेसम्म काल वेला,३÷३३ वजे देखि ५÷१६ वजेसम्म लाभ र ५÷१६ वजे देखि सूर्योदयसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।
ॐः–राहुकाल—मध्यान्ह १२÷११ वजेबाट अपरान्ह १÷३० वजेसम्म,यमघण्टायोग विहान ८÷१६ वजेबाट ९÷३५ वजेसम्म, दूरमुहूर्त पूर्वान्ह ११÷५० वजेबाट मध्यान्ह १२÷३२ वजेसम्म अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । अशुभ अभिजित मुहूर्त पूर्वान्ह ११÷५० वजेबाट मध्यान्ह १२÷३२ वजेसम्म रहनेछ । मध्यम् गुली काल पूर्वान्ह १०÷५३ वजेबाट मध्यान्ह १२÷११ वजेसम्म रहनेछ ।
ॐः– पाद हिन,स्त्री राशी,कफ प्रकृति,रात्री वली,शब्द रहित,पिङ्गल वर्ण,द्विस्वभावात्मक,स्निग्ध,अति प्रजा,अति स्त्री संगी, विप्र वर्ण सौम्य,उत्तर दिक् स्वामी,शिथिलाङ्ग भएको मीन राशीवाल व्यक्ति जल क्रीडामा निपुर्ण,विनम्र,स्त्री प्रिय,प्रचण्ड श्रेष्ठ,पण्डित,चतुर,अल्प भोजी,चञ्चल,श्रेष्ठ रत्न भूषणादि धारण गर्ने हुन्छन् । रचनाकार,यशस्वी,आलसी,अधिक सन्तान भएको हुनेछन् । आकस्मिक हानी उठाउने,ठुला आँखा एवं सामान्य कदको शरीर भएका हन्छन् । जल तत्व, अङ्गमा, पैदला भाग र दाँत र रोगमा टि.भी.र कफ सम्बन्धित हुन्छ । शुभ बारमा रवि,सोम,मंगल र विहिवार,मध्यमवारमा शनिवार एवं हिन बारमा बुधवार, र घातवारमा शुक्रबार मानिन्छ । प्रारम्भिक अवस्था सामन्य रहनेछ । मध्य अवस्थामा दुःख र अन्त्यावस्था सुखी रहला । भाग्योदय २१ र २२ वर्षको उमेरमा हुनेछ ।
“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति” ।
गरेका नब्बे प्रतिशत काम सम्पादन हुनेछन् । जीवन साथिबाट रचनात्मक सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । विदेश यात्राको योग देखिन्छ । आम्दानी बढ्नेछ ।
आराम सँग बस्न पाईने छैन । सहयोग गर्ने भन्दा खुट्टो तान्ने बढि हुनेछन् । सामान्य प्रयासबाट कार्य सम्पादन हुने छैनन । काम गर्दा गोपनियता अप्नाउनु होला । प्रतिपश्र्धा गर्नु पर्नेछ ।
मन चलाएर होईन हात चलाएर अगाडि बढ्नु होला । हतार गर्दा काम विग्रिने छन् । ढिला गर्दा अवसर फुत्किनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ ।
काम गर्न मन लाग्ने छैन । रमाईलो गरेर दिन विताउन मन लाग्नेछ । आम्दानी भन्दा खर्च बढि हुनेछ । अरुको काममा जश मिल्ने छैन । आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । व्यापार घट्नेछ ।
समयले साथ दिनेछ । गरेका काम बन्ने छन् । नयाँ सोच विचारका साथ काम हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट पनि आय आर्जन बढ्नेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ ।
संचित धन बढ्नेछ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् र लाभदायक रहलान् । अरुलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर काम गर्नु होला । वोलिको प्रभाव बढ्नेछ । घरमा अतिथिको आगमन हुनेछ ।
समस्याको समाधान निस्कनेछ । गरेका कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । पारिवारिक सुख,शान्ति मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
कर्म अनुसारको फल मिल्ने छैन । बाह्य काममा चासो बढि हुनेछ । परोपकारी काममा लगानी बढ्नेछ । इष्टमित्र साथि भाईका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ सतर्क रहनु होला ।
आफ्ना विषय बस्तुले प्राथमिकता पाउनेछ । गरेका कामबाट धेर थोर लाभ लिन सकिनेछ । भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर काम गर्नु होला । व्यापार बढ्नेछ ।
काम सरल तरिकाले सम्पादन हुनेछन् । अधुरा काम फस्र्योट हुनेछन् । सामाजिक कामबाट इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । घर परिवार आफन्तबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ ।
आस्था र विश्वास बढ्नेछ । आफुले सोचे जस्तो हुने छैन । काम गर्दा इज्जतको ख्याल राख्नु होला । अरुको काम गरेर जश मिल्ने छैन । विना उपलब्धिका काममा समय बढि खर्च हुनेछ ।
उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्य विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ । मिठा मिठा खानेकुरा खादा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । दैनिक काम काजमा अवरोध आउन सक्छ । खर्च बढ्नेछ ।
Published on: Tuesday, January 9, 2018 Time: 22:36:01
मरेकी छोरी जव काठमाण्डौको कोटेश्वरमा हिड्दै गर्दा भेटिएपछि…….
कतारमा २२ बर्षे नेपाली केटोलाई फाँसी ? भारतियलाई मारेको झुटो आरोप ! आमा बुवाको रुवाबासी (भिडियो हेर्नुस)
पैसा हेरेर बुवा जस्तो मान्छेसंग बिहे गर्यो भन्नेलाइ सिल्पाले दिईन् यस्तो कडा जवाफ (भिडियोसहित)
भोली सोमबार यो समयमा लाग्ने भयो यति लामो चन्द्रग्रहण, भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम !
चितवनमा भेटिए- सँसारमै नभएको अनौठो मान्छे ! पुलिसले देख्ने बित्तिकै किन समातेर हत्कडी लगायो ? (भिडियो हेर्नुस)
फेरी साउन २ र १० गते नेपाल बन्द
भक्तपुरको घटनामा आयो नयाँ मोड को हुन् समीर ? सामाजिक संजालमा अन्तर्वार्ता दिने छिमेकी खतरामा भयको बताउँछन् // भीडीयो हेर्नुस
एक्कासी दुवै हात काटिदा.. शिशिर भण्डारी रोए ? श्रीमतीले पनि छोडेर जाँदा यस्तो भिडियो बाहिरियो (भिडियो हेर्नुस)
एक युवती अग्लो पुलवाट हामफालेपछि
फेसबुक, टिकटकमा भाईरल भएका म्याकुरी र शिशिर भण्डारीको फोनमै झगडा पर्यो ! तिम्रो दिमाग ठिक छ भन्दै यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस)
ख्यातिप्राप्त नेपाली गायक प्रमोद खरेल सद्भावना दूत नियुक्त
चितवनमा सवारी दुर्घटनामा १४६ जनाले गुमाए ज्यान
छवी–शिल्पाको झगडाको भित्रि कुरा खुल्यो रेखा थापालाई यस्तो आरोप ! (भिडियो सहित)
शिल्पा मरिन् भने को जिम्मेवार ? पहिलो श्रीमानको बारेमा विशेष खुलासा गर्दै आए कलाकार किशोर खातिवोड़ा (भिडियोसहित)